အိပ်မက်တွေ အမှန်တကယ် ဖြစ်လာတဲ့ Troye Sivan
On May 30, 2018 By Angel
Troye Sivan ကိုတော့ လူငယ်တော်တော်များများသိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အသက် ၂၂ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ Troye Sivan ကတော့ တောင်အာဖရိကမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ သြစတြေးလျနိုင်ငံသား အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Troye ကတော့ You tube မှာ Subscribers 6.1 million ရှိပြီး You tube ကနေ ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ Troye Sivan တစ်ယောက်ဟာ US billboard 200 မှာလည်း နံပါတ် ၅ အဆင့်ရရှိဖူးခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မေလ ၁၉ ရက်နေ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Taylor Swift ရဲ့ Reputation Stadium Tour မှာလည်း ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ “Dream come true.” ဆိုပြီး အခုချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့အိပ်မက်တွေ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါပြီလို့ ပြောကြားလာပါတယ်။
Taylor Swift ရဲ့ Reputation Stadium Tour ကိုတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ Rose Bowl Stadium မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Reputation Tour ရဲ့ special guest အဖြစ် Selena Gomez နဲ့ Shawn Medes တို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
Troye absolutely owned the Rose Bowl ????? @troyesivan thank you so much for coming!!!
A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on May 20, 2018 at 2:22am PDT
Thank you @shawnmendes and the 60,000 people who came to the Rose Bowl show tonight! YOU WERE MAGICAL ?
A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on May 19, 2018 at 1:17am PDT
PREVIOUS POST Previous post: SHINee အဖွဲ့ရဲ့ ၁၀နှစ်ပြည့် Comeback Album လေးက ထွက်ရှိပြီး ၂၄နာရီမပြည့်ခင်မှာပဲ iTunes Chart မှာ Top ဖြစ်လို့နေပြီတဲ့နော်
NEXT POST Next post: BTS အဖွဲ့ရဲ့ Comeback Album လေးဖြစ်တဲ့ ‘Love Yourself: Tear’ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ပြီ